Munaasibad Xadhiga Lagaga Jarayey Xarun Caafimaad Oo Ka Dhacday Degamada Ceegaag (Sawiro) - jornalizem
Munaasibad Xadhiga Lagaga Jarayey Xarun Caafimaad Oo Ka Dhacday Degamada Ceegaag (Sawiro)
Munaasibadan oo xadhiga lagaga jarayey xarunta caafimaad ee MCH ka Degmada Ceegaag ayaa ka dhacday isla degmadaasi. waxaana munaasibadani kasoo qayba galay Waxgarad, Culuma awdiin, Ururada Bulshada, Haween, Dhalinyaro, Iyo marti sharaf kale oo aad u tira badan.
Hadaba munaasibadani oo ahayd mid aad u balaadhan ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay hawl wadeenka xaruntan caafimaadka MCH ka ee Degmada Ceegaag Cabdiriigle Xaaji Cali, isagoona sheegay in aad u muhiim tahay xaruntani isla mar ahaan taana ay wax badan kusoo kordhin doonto hawlaha caafimaad ee Deegaanka.
Sidoo kale waxaa uu masuulku u mahadceliyey GOVERNMENT ALBERTO oo ah gobolka mida Canada iyo Hay'adda waxbarashada iyo hurmarinta reer miyiga ee loo soo gaabiyo SCARDO Islamar ahaantaana waxaa uu amaan weyn u soo jeediyey qurba joogta kasoo jeeda Degmada Ceegaag.
Waxaa isna halkaasi ka hadlay Proffessor C/risaaq Maxamed Aadan (Lafoole) oo ah Gudoomiyaha Jaamacada Nugaal ee Magaalada Laascaanood, isagoona si weyn usoo dhoweeyey dhismahani isla mar ahaan taana xusay in aad uu ugu baahnaa Deegaankani in laga fuliyo xarun noocan oo kale ah, waxa uuna ugu dambeyntii uu xadhiga ka jaray xaruntani isagoona u rajeeyey dadka Deegaanku in ay kaa faa'iidaysan doonaan.
Hadaba dhamaan mas'uuliyiin ka hadashay munaasibadani ayaa xusay inay tahay in muhiima xaruntani waxa ayna munaasibadaasi kusoo dhamaatay jaw dagan oo farxadi ku dheehan tahay.
Xafiiska Wararka Ee Jornalizem.com